सहमति होइन समझदारी गर !
बिजय कुमार पाण्डे
म सुखी जीवन बाँच्न चाहन्छु । चाहँदैमा नपाइने रहेछ । सैद्धान्तिक रूपमा सुखी हुन चाहेर पनि म प्रायः यस्ता काम गर्छु जसले अन्ततः मलाई दुःख र विषादको छेउमा लगेर थचारिदिन्छन् । परिणाम कर्मले दिन्छ न कि चाहनाले भन्ने बझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो । यही उदाहरणलाई राजनीतिसित पनि जोड्न सकिन्छ । आफूलाई जान्ने, सुन्ने, ठान्ने हर मानिसको मुखमा एउटा थेगो झुन्डिएको छ, "नेपालमा नेता नै भएन, नेतै भएन ।" पल्ला घरे साहिँलीको चिया दोकानदेखि पाँचतारे भट्टीसम्म, तल्ला घरे भरिया कान्छादेखि पीएचडी गरेको विद्वान्सम्म एउटै राग अलाप्न व्यस्त छन्, "नेपालमा नेतै भएन ।"
पुराना दिनमा यो राग सुन्दा मलाई कुनै महावाणी सुनेझैं लाग्थ्यो । आजभोलि हाँसो उठ्छ । हर राग गाउने एउटा रितु र समय सीमा हुन्छ । सूर्योदयको आराधना गर्दा बजाइने संगीत, साँझ परेपछि गरिने आरतिको बेलामा पनि जारी नै राखियो भने वातावरण असहज हुन पुग्छ । तल्ला घरे कान्छाले त्यो काम गरे दोष दिने ठाउँ रहँदैन किनभने संगीत सिर्जन उसको विषय होइन । तर आफूलाई जान्ने सुन्ने ठान्ने हामी सबैले "नेपालमा नेतै भएन" भन्ने सजिलो राग अलाप्न बन्द गर्नुपर्छ । कतिका समय एउटै राग अलाप्ने ? नेता ठीक भएन भन्ने कुरा बच्चाले पनि भन्न सक्छ । आफूलाई "जान्ने सुन्ने" ठान्नेहरूले साँच्चिकै जानेका छन् भने यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ, "नेपालमा हामीले खोजेजस्तो नेता किन भएन ? किन ?"
अत्यन्त गहिरा समस्याको सतही समाधान खोजेर हामी कहीं पुग्न सक्दैनौं । यस विषयमा एक मौलिक र सिर्जनात्मक बहस थालनी हुनुपर्छ । विवाद होइन बहस । होइन भने, "नेतै भएन, नेपालमा नेतै भएन" भन्ने जप्दाजप्दै थप एक पुस्ताको जीवन बित्नेछ । मेरै जस्तो गति हुनेछ । म पनि त सर्वगुण सम्पन्न सुखी जीवन बाँच्न चाहन्छु । चाहँदैमा हुन्छ र ?
"सर्वगुण सम्पन्न आदर्श नेता" हामी खोज्दै गरौंला, आजको दिनमा चाहिँ जे जस्ता छन् तिनैबाट काम चलाउनु बाहेक हाम्रो कुनै विकल्प छैन । नेतागण समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुनेको लिस्ट तयार गर्न व्यस्त छन् । त्यसपछि मात्र दलहरूबीच संविधानसभाको बैठक र सरकार निर्माणलाई लिएर "खास" राजनीतिक मन्त्रणा सुरु हुनेछ । "अब पार्टीहरूबीच सहमति चाहियो, सहमति हुनुपर्‍यो" भन्ने थेगो बजारमा आउने मौसम सुरु भएको छ । पुराना संविधानसभाको गल्ती नदोहोर्‍याउने हो भने यो थेगोका विषयमा बडा गहिरो तवरले बझ्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा भन्दै थिए, "सबै राजनीतिक दलबीच सबै कुरामा सहमति हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पाखण्ड हो । त्यो कहिले पनि सम्भव छैन । दलहरूको निर्माण नै अलग-अलग मतका आधारमा भएको हुन्छ । मत भएपछि मतान्तर हुन्छ । एउटै दलभित्र त सबै विषयमा सहमति हुँदैन भने फरक-फरक दलबीच सबै विषयमा कसरी सहमति सम्भव छ ? अलग-अलग विचारबीच समझदारी मात्र हुन सक्छ सहमति होइन ।"
गगन थापाले भनेझैं "सहमति र समझदारी" नितान्त भिन्न कुरा हुन् । जस्तो, मेरो आमा शाकाहारी हुनुहुन्छ । म मांसाहार गर्न रुचाउँछु । यस विषयमा हाम्रा धारणा यति फरक छन् कि जतिसुकै लामो छलफल गरे पनि हामीबीच कुनै सहमति हुन सक्दैन । किनभने दुवै पक्षको एउटै "मति" भएपछि मात्र सहमति हुनसक्छ । त्यसैले हामी मांसाहारको मुद्दामा एक अर्कालाई सहमतिमा ल्याउने अर्थहीन कोसिस नै गर्दैनौं । त्यसको साटो हामीले "समझदारी" बनाएका छौं । भान्छामा मासु पाकेको दिन भाँडाकुँडा अलग-अलग राख्ने, मासु झिकेको डाडुले दाल तरकारी नछुने, लसपस नगर्ने समझदारी । त्यस समझदारीले गर्दा हामी दुवैलाई सजिलो भएको छ । हिजै मात्र एक छापामा पढेँ "नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरू सित सहमति गरेर शान्ति ल्याए ।" सतही कुरा लेखेको रहेछ । मन्डेलाले गोरासँग सहमति होइन समझदारी गरेका हुन् । समझदारी भन्नाले "उस्तै उस्तै मति नभए तापनि साथसाथ सहकार्य गर्ने विधि" हो । सहकार्य गर्न समझदारी भए पुग्छ । सहमति अनिवार्य छैन । सहमति नै हुनसके त अति उत्तम तर भएन भने के गर्ने ? मूल प्रश्न हो यो । यो प्रश्नको इमान्दार उतर खोज्न सकिएन भने राजनीति र समाज दुवैमा पाखण्डी उपदेशकहरूको बोलबाला हुन पुग्दछ । जस्तो विगत संविधानसभाका दौरानमा भयो ।
गल्ती नदोर्‍याउने हो भने संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को काम सुरुदेखि नै दुई टुक्रा पार्नु जरुरी छ । सभामुख पनि दुईवटा बनाउँ । सरकारमा रमाउनेहरू सरकारमा जाउन, संविधान निर्माणमा योगदान दिन चाहनेहरू अर्कोतिर बसुन् । व्यवस्थापिका संसद्को छाया संविधानसभामा सकेसम्म कम परोस् । एक अंग्रेजी उखान छ, "डु द डुएबल फस्ट" गर्न सकिने जति काम पहिला गरौं । कांग्रेस र एमालेबीच समझदारीको खाका कोरियोस र त्यसका आधारमा एमाओवादी लगायत अन्य दलसित सहमति विस्तार गरियोस् ।
यो प्रक्रिया सुरुवात गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला लगायत सबै कांग्रेसजनले बुझ्नुपर्छ, आजको दिनमा जनताले कांग्रेसलाई सबैभन्दा धेरै सिटमात्र दिएका छन् । एक्लै सरकार बनाउन बहुमत दिएका छैनन् । संविधान बनाउन चाहिने दुई तिहाइको त कुरै छाडौं । सबैले यो पनि हेक्का राख्नुपर्छ, आजको दिनका सुशील कोइरालामा न २०४६ पछिका गणेशमान सिंहको सौर्य छ न त २०६३ सालका गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो रणनीतिक कौशल । आज कांग्रेस सभापतिले बडा उदारता र कुशलताका साथ एमाले जस्तो महत्वाकांक्षी नेताहरूको भीडले भरिएको पार्टीलाई समझदारीमा ल्याउनु पर्नेछ । कांग्रेसले आदेश जारी गर्ला र एमालेले त्यो फरमानलाई शिर नुहाएर शिरोधार्य गर्ला भन्ने भ्रममा नबस्दा वेश हुन्छ । एमालेको त कुरै छाडौं, शेरबहादुर देउवा पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कोइरालामाथि नै छ । लामो समयदेखि कांग्रेस बुझेका महेश आचार्यले त्यसै भनेका होइनन् "कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तत्काल डाकेर अगाडिको मार्गचित्र स्पष्ट पार्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।" महेशले राम्ररी बझेका छन्, सानो कोटरीको बलमा देश चलाउन खोज्नु पार्टी नेत्रृत्वको बुता भन्दा बाहिरको कुरा हो । आज कांग्रेसको कुनै पनि शीर्ष नेता गणेशमानजी, किशुनजी वा गिरिजा बाबु जस्तो "क्यारेस्मेटिक" छैन । आज शीर्ष कांग्रेस नेत्रृत्वको कुनै शक्ति छ भने सामूहिकतामा मात्र छ । कांग्रेसले पहिला आफू प्रस्ट हुन जरुरी छ, त्यसपछि एमालेलाई प्रष्ट्याउन जरुरी छ अनि एमाओवादी र अन्य दललाई । सबै कुरा एकै पटक गर्न खोजे, सबैलाई एकै पटक सहमतिको चण्डीपाठ पढाउन खोजे, प्रस्टता र दम्भबीच अन्तर रेखा बझ्न नसके आजको खुसियाली एकाएक जटिलतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । त्यो जटिलताको मार कांग्रेस पार्टीले मात्र होइन सारा देशले बेहोर्नुपर्नेछ ।
आफ्नो काँधमा आफ्नो कोटरीको मात्र होइन, आफ्नो पार्टीको पनि, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशको पनि बोझ आएको छ भन्ने बोध सुशील कोइरालाजीलाई आफ्ना हरेक कदममा हुनु अनिवार्य भएको छ । जडताको जगमा उभिएको उदारता प्रदर्शन गर्न सक्नु वा नसक्नुमा नै कांग्रेस पार्टीको सफलता वा असफलता निर्भर रहनेछ ।
आजभोलि नेल्सन मन्डेला चर्चाको शिखरमा छन् । मन्डेलाको आत्मकथा "लङ वाक टु फ्रिडम" का लेखन सहयोगी रिचर्ड स्टेङगल भन्छन्, "मण्डेला अफ्रिकाका त्यस्ता विरलै राष्ट्रपति भए जसले एक अवधि भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न चाहेनन् । चाहेको भए उनलाई कसैले रोक्ने थिएन । चाहेको भए उनी आजन्म राष्ट्रपति भएरै बस्न सक्थे । तर उनलाई थाहा थियो कि उनका प्रत्येक कदम अरूका निम्ति प्रेरणाका मापक बन्नुपर्छ । असहिष्णुता बाहेक मन्डेला जीवनका हरेक कुराकाप्रति सहिष्णु थिए ।" आज नेपाल आमा प्रत्येक शीर्ष नेताबाट कुनै न कुनै प्रकारको त्यागको अपेक्षामा प्रतीक्षारत छिन् । अलिअलि त्याग सबैले गर्ने हो भने देशले समविधान पाउन वर्ष दिन पनि कुर्नुपर्ने छैन । देशलाई यही सरल समझदारीको प्रतीक्षा छ ।